Ny lalao Harry Potter tsara indrindra amin'ny Android | Androidsis
Ny lalao Harry Potter tsara indrindra amin'ny Android
DaniPlay | 19/07/2021 01:14 | Nohavaozina amin'ny 20/07/2021 01:15 | Lalao Android
Izy io angamba no iray amin'ny sagasy nahomby indrindra tamin'ny tantaran'ny sinema, alohan'ny hafa fantatra amin'ny anarana hoe Star Wars, Jurassic Park na James Bond. Harry Potter rehefa nandeha ny fotoana dia nahalala nanokana ny tenany, noho ny tantara ao ambadiky ny bokiny tsirairay avy ary nifanaraka tamin'ny sarimihetsika.
Amin'ny sehatra iray izay tsy nahakivy azy dia ny lalao video, izay nanamboarany akany koa ao amin'ny fitaovana finday. Atorinay anao ny lalao Harry Potter tsara indrindra amin'ny Android, miaraka amin'ny karazany maro amin'izy ireo ary ny sasany amin'izy ireo dia manana vidiny fanampiny amin'ny filalaovana azy ireo.
1 Harry Potter: Wizards Unite
2 Quiz ho an'ny ody Harry Potter
3 LEGO Harry Potter: Taona 1-4
4 LEGO Harry Potter: Taona 5-7
5 Harry Potter: Mistery Hogwarts
6 Quiz Harry Potter Wizard: U8Q
7 Harry Potter: Puzzles sy majika
8 Harry Wizard Potter Magic Beat Hop Tiles
9 Hogwarts HP Puzzle
10 Lalao Potika Magic Jigsaw Puzzle
Ny developer Niantic dia mandefa lohateny hafa ho an'ny saga Harry Potter miaraka amin'ny lohateny Harry Potter: Wizards Unite. Miorina amin'ny lohateny Pokémon Go, izao tontolo izao dia mivelatra amin'ny mekanika mampiankin-doha tanteraka, izay tsy maintsy ampiasanao ny tena zava-misy mba handroso.
Ao amin'ny Harry Potter: Wizards Unite dia mila manafaka ireo zavaboary amin'ny hex ianao, noho izany dia mila mampiasa ody majika ianao. Ny iray amin'ireo lohahevitra lehibe dia ny manangona zavatra, izy rehetra ireo dia ho zava-dehibe amin'ny fandrosoana amin'ny lalao mahafinaritra ho an'ny karazan'olona rehetra.
Ahitana hetsika manokana ny lohateny, izay ahafahanao milalao miaraka amin'ny namanao amin'ny maha ekipa anao, miaraka amin'ny mpilalao hatramin'ny efatra farafaharatsiny. Tsy io no sarobidy indrindra, na eo aza izany dia mendrika ny manandrana azy ary milalao ny iray amin'ireo lohateny hafa amin'ny sisa amin'ny saga amin'ny Android.
Quiz ho an'ny ody Harry Potter
Na dia tsy lalao video somary somary ambany aza, Ao amin'ny Quiz for Harry Potter Spells dia tsy maintsy asehonao ny zavatra rehetra fantatrao momba ilay andian-tantara malaza ny tantara foronina. Lalao sy valiny io, izay tsy maintsy hofantahantsika raha te handalo ireo fihodinana samihafa isika.
Miorina amin'ny fehezanteny sy fitenenana avy amin'ilay saga fanta-daza, Izy io dia manana ambaratonga maro sy rafi-panontaniana izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo izay mety tsy ho hita ao amin'ilay lisitra. Mety samy hafa ny valiny, na misy valiny efatra azo atao na manampy ireo litera tsy hita.
Mipoitra ny ody, nefa koa zavatra maro hafa avy amin'ilay andian-tantara fanta-daza, noho izany raha mbola tsy hitanao dia tsara kokoa ny mahita azy ireo tsirairay avy eo. Tsy fampiharana ofisialy izy io, fa safidy mahaliana ihany raha te hanana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny fianakavianao sy ny namanao ianao.
Developer: Tontolon'ny quiz
LEGO Harry Potter: Taona 1-4
Ity lohateny ity dia miorina amin'ny boky Harry Potter sy sarimihetsika 1 ka hatramin'ny 4, izay hitondrany ny toeran'ireo mpilalao toa an'i Harry, Ron, Hermione, ankoatry ny hafa. Tsy maintsy mijery Hogwarts amin'ny ambaratonga mihoatra ny 40 ianao, miaraka amin'ny sary avo lenta ary tonga lafatra hiasa amin'ny telefaona tsy dia matanjaka loatra.
Ity lalao ity dia mifototra amin'ny lohateny LEGO hafa, mahafinaritra ny mandany ora maro mipetaka amin'ny efijery kely, na dia azo lalaovina amin'ny fitaovana toy ny takelaka na solosaina misy emulator aza izy io. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fahaizana mizaha ny sarintany tsirairay hahitana ny miafina ary mandrosoa eo amin'izy ireo.
Anisan'izany ny Tournoi Triwizard, Tompondaka Erantany Quidditch, ny ady amin'ny basilisk ao amin'ny efitranon'ireo tsiambaratelo, ny fihaonana tamin'i Aragog ary ny fifanatrehana mivantana tamin'i Voldemort. Ny fanaraha-maso miaraka amin'ny efijery mikasika dia mora sy mora, miaraka amin'ny tsora-kazo havia anananao ny fandidiana, miaraka amin'ireo eo ankavanana dia ireo izay mifanerasera amin'ny tarehin-tsoratra sy ny fahavalo. Na eo aza ny naotiny, LEGO Harry Potter: Ny taona 1 ka hatramin'ny 4 dia mendrika andramana amin'ny fitaovana Android.
Developer: Warner Bros. Orinasa iraisam-pirenena
LEGO Harry Potter: Taona 5-7
Ity lohateny ity dia hapetraka amin'ny taona faramparan'ny Harry Potter ao amin'ny sekoly Hogwarts, miaraka amin'ny fahasahiranana lehibe kokoa satria natao ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 7 taona. Ny traikefa amin'ny lalao dia ho tsara kokoa noho ny amin'ny fanaterana 1 ka hatramin'ny 4, manana fizarana sary lehibe kokoa sy tantara nohatsaraina.
Ny fanaraha-maso ao amin'ny LEGO Harry Potter: Ny taona 5-7 dia mora atao amin'ny efijery mikasika, na ny kendrena amin'ny kendrena, ny famosaviana na ny fanovana tarehin-tsoratra. Mamorona dela ikoizana amin'ny alàlan'ny manipy sy mihodinkodina ody rantsan-tànana, iray amin'ireo zavatra maro azo.
LEGO Harry Potter: Taona 5-7 Add Bookmarks, fenoy ny 100% amin'ny lalao ao anatin'ny fotoana fohy ary hiseho eo amin'ny lalao an-tserasera ny isa. Ny zava-bitan'ity mpilalao lalao video fanta-daza ity dia mitotaly 25, ny tsirairay amin'izy ireo dia hiala mora ka hatramin'ny sarotra.
Harry Potter: Mistery Hogwarts
Hogwarts no hiompanan'ny lalao video, ny mekanika dia andraikitra madio ary iray amin'ireo lohateny izay nampifandray ireo maro nanandrana azy io. Ilay olona tantanintsika dia hianatra fika sy hery majika, mifototra amin'ny fandrosoana, ary ilaina koa ny fahazoana karatra ambaratonga raha te handroso haingana isika.
Ny tantara dia misy fientanentanana sy tantara an-tsehatra lehibe, ny sary an-tsaina an'ity lalao ity dia iray amin'ireo mavesatra matanjaka, iray amin'ireo izay mitohy mitazona ilay karazany. Ny fomba filalaovana dia mety ho somary mankaleo amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny singa tsirairay eo amin'ny efijery.
Harry Potter: Hogwarts Mystery mihinana amin'ny micropayments, izany rehetra izany dia lohateny maimaim-poana an'ny saga ary noforonin'ny mpamorona Jam City. Ny lanjan'ilay Hogwarts Mystery dia 165 megabytes, mila Android 5.0 na kinova ambonimbony kokoa izy io ary mihoatra ny 50 tapitrisa ny fampidinana.
Quiz Harry Potter Wizard: U8Q
Lalao quiz nandroso be lavitra noho ny Quiz ho an'ny Spell Harry Potter, tsy mifototra amin'ny fehezanteny sy ny fitenin'ny sarimihetsika samihafa. Ny zavatra tsara momba ny Quiz Harry Potter Wizard: afaka mamaly fanontaniana tsy an-kanavaka ny UBQ, na dia azonao atao aza ny misafidy ireo sarimihetsika resahina.
Toy ny lalao rehetra, ny valiny dia hanana fe-potoana Manomboka ny hetra dia azo ampitomboina raha tiana amin'ny safidy lalao. Zava-dehibe ny famaranana ny laharana amin'ny maha tompon-daka anao, noho izany dia tsy mila diso be loatra ianao raha te handresy ny mpanohitra.
Voamarina ny valiny, ny tsirairay amin'izy ireo dia handefa anao any amin'ny rohy mankany amin'ny pejy mba hianaranao bebe kokoa momba azy ireo, tena ilaina tokoa raha mpankafy an'ity andiany ity ianao. Mety miaraka amin'ny fianakaviana mahafinaritra ary miaraka amin'ny namana raha tianao i Harry Potter sy ny tontolony manontolo.
Harry Potter: Puzzles sy majika
Ny lalao ankamantatra sy ny majika dia tsy mbola natambatra tsara kokoa noho ny amin'ny fampiharana ity. Harry Potter: Puzzles sy Magic dia noforonin'i Zynga fanta-daza miaraka amina endri-javatra vaovao maro, ao anatin'izany ny 3-in-a-row miaraka amin'ireo sombin-javatra sasany tafiditra ao amin'ny lalao avy amin'ireo andian-dahatsoratra fanta-daza.
Ny fandrosoana ataonao tsirairay dia hamaha fotoana manandanja amin'ny sarimihetsika, ny ady nataon'i Harry, Ron ary Hermione miaraka amin'ny troll, ny vazivazy nataon'i Fred sy i George na i Hagrid mikarakara zavaboary majika. Mianara bebe kokoa momba an'i Hogwarts, ary koa manangona zavaboary izay hanampy anao hamaha ny piozila Amin'ny fomba tsotra. Milanja 132 megabytes eo ho eo ny fampiharana, efa nalain'ny olona 10 tapitrisa mahery ary ny kintana dia 4,7 kintana.
Harry Wizard Potter Magic Beat Hop Tiles
Lalao 3D ahafahanao mamaha ny endri-tsoratra amin'ny refy telo ary mitsambikina amin'ny tile. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy misafidy iray amin'ireo piano misy ianao ary manamboatra mozika, misy karazana karazany maro ahafahana mihetsika, na tianao na manao ny dingana voalohany.
Ny naoty dia noforonin'ireo manam-pahaizana amin'ny mozika ihany koa, noho izany dia mila mitsambikina isaky ny kiheba ianao mba hamoronana hira tsirairay. Ny fampiharana Harry Wizard Potter Magic Beat Hop Tiles dia milanja manodidina ny 54 megabytes ary efa navoakan'ny olona maherin'ny 100.000.
Developer: Emiliya hhh
Hogwarts HP Puzzle
Miorina amin'ny tontolon'ny Harry Potter, ity piozila malaza ity dia miorina amin'ny Hogwarts, ka tonga ny fotoana hametrahana azy tsikelikely mandra-pahavitany. Ny zavatra mahafinaritra dia ny mahavita manao zavatra maro isan-karazany isaky ny avy, havaozina matetika, teboka iray tokony hodinihina manokana.
Izy io dia manana piozila marobe, manampy karazana haavo sarotra roa, ny iray ho an'ny ankizy ary ny iray ho an'ny olon-dehibe amin'ny 16 ka hatramin'ny ambony. Afaka mihodina ianao, manamboatra ary mameno ireo sombin-javatra, miaraka amin'ny piozila tsirairay avy dia homeny loka ianao hanavotana ankamantatra vaovao mandritra ny herinandro.
Tsy hita tao amin'ny magazay ilay fampiharana. 🙁
Mandehana mitahiry Google Fikarohana Internet
Lalao Potika Magic Jigsaw Puzzle
Puzzles manan-danja raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny tontolon'ny Harry Potter ianao. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamaha ireo piozila izay hiseho mandritra ny dia samihafa ianao, izay ho sarotra kokoa amin'ny fanoherana bebe kokoa, miankina amin'ny fahaizanao mamita azy io.
Ny zavatra tsara momba ny piozila dia ny fahasarotan'ny tsirairay, mandeha amin'ny toerana iray ny taila ary raha tsy mety dia hampitandrina anao izy fa tsy hiditra amin'io toerana io. Potter Magic Jigsaw Puzzle Game dia nahazo isa 4,6 kintana tamin'ny 5. Navoaka tamin'ny olona maherin'ny 1.000 izy io ankehitriny.
Developer: lalao mpanjaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Harry Potter tsara indrindra amin'ny Android
Ny lalao stickman 6 tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana 10 ambony indrindra hanaovana Maps Maps